वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती ! पुरुषले अबस्य हेर्नुहोस्… – Sanjal Nepal
Homeसमाचारवैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानका यी साना गल्तिले यसरी बिग्रिन्छन् श्रीमती ! पुरुषले अबस्य हेर्नुहोस्…
अर्को तपाईको फोनको श्रीमतिले कस्तो रेस्पोन्स गर्छिन् । त्यसप्रति पनि तपाई सचेत हुनुपर्छ । तपाईले फोन गर्र्दा कस्तो तरिकाले बोल्नु हुन्छ ? ठा’डो पाराले या सामान्य तरिकाले ? या बोल्दा बोल्दै रिसाएर फोन का’ट्नु हुन्छ ? जब श्रमती हरु बोल्दा बोल्दै एकासी झ’र्किने ,रिसा’उने गर्छन भने शं’का गर्नैपर्छ । असल श्रमती हुन् भने तपाई जे जस्तो भन्नुस बिदेस को फोन ,आफ्नो श्रीमानको फोन आउदा खुसि नै हुनु पर्छ । यदी सामान्य कुरो मै फोन काट्ने , झ’र्किने गरिन भने सम्झनुस कुनै चक्कर चल्दै छ, जहाँ अब तपाई को फोन नआउदा पनि कुनै फरक नपर्ने अवस्था भैसकेको छ ।
अर्को चनाखो हुनुपर्ने प्रश्न हो श्रीमती कतिको चुलबुले छिन् कुनै जागिर गर्नु हुन्छ या जागिर गर्ने बहाना गर्दै छिन् ? श्रमती चुलबुले छिन् भने अलि ख्याल गर्नु होस् , किन कि महिला हरु जति चुलबुले हुन्छन । उतिनै यौ’न प्यासी पनि हुन्छन् , कुनै जागिर गर्नु भएको छ या छैन । कस्तो खाल्को जागिर हो , जानकारी लिनुहोस् , यहाँ यस्तो पनि देखिनमा आएको छ श्रीमती जागिरमा जाने भन्ने उल्टो आफ्नो पैसो खर्च हुने । यो अवस्था घरबार बिग्रिएको अवस्था हो ।
कुनै समयमा बुढोको कमाइमा रजाइ गर्न पल्कीसकेको अवस्था पनि हुन सक्छ । यस्तो अवस्था आउन नदिन तपाई संगै भएको बेलाका उनको मोबाइलमा मिस कल, रिसिभ कल, म्यासेज, डाइल नम्बर बारम्बार हेर्दै गर्नुपर्छ । यसले पारिवारिक कहल आउला भनेर कत्ति पनि नडाराउनुहोस् । किनकी श्रीमान श्रमतिको झ’गडा परालको आ’गो यस्सै भनिएको होइन । एक छिन झ’गडा भए पनि पुनः मिलन भइहाल्छ । यदि श्रीमति असल बाटोमा छिन भने अवस्य पनि झगडा पर्दैन ।
November 29, 2020 admin समाचार 3777
November 7, 2020 admin समाचार 9935
August 2, 2020 Administer Banner Post, अन्तर्राष्ट्रिय, भिडियो, मनोरंजन, रोचक, समाचार, स्वास्थ्य /जिबनशैली 486406
LEX 18 agenda conversation: Job club (486406)
सञ्जेललाई कुटपिट गर्ने कर्मचारी बर्खास्त, अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप (458510)
Hello world! (384510)
A above Googler and career teach says you shouldn’t at all times flip your ardour intoaabounding-time job (352017)